अभिनेत्री एनाबेला भन्छिन् ‘वाइन्स्टिनले ‘बाँधेर बलात्कार’ गरे - Gokarna News from Nepal
अभिनेत्री एनाबेला भन्छिन् ‘वाइन्स्टिनले ‘बाँधेर बलात्कार’ गरे
एजेन्सी – अमेरिकी अभिनेत्री एनाबेला सिओराले हार्वी वाइन्स्टिनले आफूमाथि निर्दयी तवरले बलात्कार गरेको बताएकी छन्।
वाइन्स्टिनमाथि लागेको बलात्कार तथा यौनदूराचारको मुद्दा सुनुवाईको क्रममा अदालतमा उपस्थित भएर अभिनेत्री एनाबेलाले आफ्नो बयान दिएकी हुन् ।
अदालतमा दिएको बयानको क्रममा एनाबेलाले वाइन्स्टिनले आफूलाई अति गम्भीर रुपमा बलात्कार गरेको बताएकी हुन् । हलिउड निर्माता वाइन्स्टिनले २५ वर्षअघि आफूलाई आफ्नै घरमा बलात्कार गरेको एनाबेलाले बताएकी छन् ।
वाइन्स्टिनले आफूलाई बाँधेर बलात्कार गरेको एनाबेलाले अदालत सामु भनेकी हुन् । वाइन्स्टिन जबरजस्ती आफ्नो अपार्टमेन्टमा पसेर आक्रमण गरी बलात्कार गरेको अभियोग एनाबेलाले लगाएकी छन् ।
न्यूयोर्क अदालतका जुरी समक्ष आफ्नो बयानका क्रममा एनाबेलाले भनेकी छन्, ‘म उबाट फुत्किनका लागि प्रयास गरिरहेँ । उसलाई मुक्का प्रहार गरेँ, किक हानेँ ।’ एनाबेला द सोप्रानोस चलचित्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि चिनिन्छिन् ।
६७ वर्षका वाइन्स्टिनले आफूमाथि लागेको सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले कायम भएका सबै यौनसम्बन्ध सहमतिका रहेको बताएका छन् । तर वाइन्स्टिन दोषी ठहर भएमा जन्मकैद हुनेछ ।
एनाबेलाले आरोप लगाएको घटनाको कानूनी उपचार खोज्नका लागि न्यूयोर्कमा प्रचलित कानून पर्याप्त भने छैन । तर वाइस्न्टिको विपक्षमा रहेका वकिलहरुले ऐनाबेलाको बयानमार्फत वाइन्स्टिन यौन अपराधि रहेको पुष्टि गर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि कम्तिमा दुईजनाले वाइन्स्टिनमाथि गम्भीर यौन अपराधको अभियोग लगाउनु पर्छ ।
वाइन्स्टिनमाथि जेसिका मान नाम गरेकी महिलाले बलात्कारको अभियोग लगाएकी छन् । सन् २०१३ मा वाइन्स्टिनले आफूलाई बलात्कार गरेको उनको भनाई छ । यस्तै मिमी हेलिआईले वाइन्स्टिमाथि दबाबमा यौन सम्बन्ध कायम गर्न बाध्य पारेको अभियोग लगाएकी छन् । यो घटना सन् २००६ को रहेको मिमीको भनाई छ ।
वाइन्स्टिन पक्षले भने सबै सम्बन्ध सहमतिका रहेको बताउँदै आएका छन् । अहिले आरोप लगाउने महिलाहरुले वाइन्स्टिनलाई आफ्नो कामका लागि प्रयोग गरेको आरोप पक्षका वकिलको छ ।
भारतीय गायक बप्पी लेहरीको स्वरमा ‘यही हो हाम्रो शान’ (भिडियो)
अभिनेता हमालले भने– “मेरो प्रवेशले नेपाली फिल्ममा क्रान्ति ल्यायो”
‘अमेरिकन आइडल’ को शीर्ष २० मा छानिएपछि चर्चामा नेपाली गायक दिवेश
कार्तिक र साराको ‘लभ आजकल’को कमाइ कति ?
ड्राइभरमाथि पोखिन् मलाइकाले रिस, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल !
साँखुबाट ४०० वर्ष पुरानो ज्योतिलिङ्गेश्वर महादेवको मूर्ति चोरियो
आफ्नी छोरीले सेक्स गरेको पत्ता लगाउन बाबुले ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ गराएपछि…
सडक भिजिजन कार्यालयका ईन्जिनियरविरुद्ध ४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
अदालतबाट सफाइ पाएपछि पूर्वसभामुख महराले दिए सबैलाई धन्यवाद (विज्ञप्तिसहित)
जेलबाट छुट्नासाथ महरालाई प्रचण्डले दिए बधाई
जनकपुरमा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, २ जना पक्राउ
रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
महरा रिहा भएपछि रोशनीले भनिन्– ‘हामी दुबैले न्याय पायौँ’